Shirkada Diyaaradaha Itobiya oo duulimaadyo Cusub ka bilowdey dhawr magaalo oo Somaliyaa – Kismaayo24 News Agency
Shirkada Diyaaradaha Itobiya oo duulimaadyo Cusub ka bilowdey dhawr magaalo oo Somaliyaa
by admin 15th January 2020 0156
Puntland ayaa shaacisay in shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airlines ay duulimaad caalami ah ka bilaabeyso magaaladda Bosaso ee xarunta gobolka Bari.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Garoomada iyo duulista hawada ee Puntland Cismaan Cali Yuusuf (Xoosh) ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooga ku sheegay in diyaaradaha Ethiopian Arilines ay 3 jeer toddobaadkii ka dagi doonto garoonka Bosaaso.
“Duulimaadka koowaad waxa uu bilaaban doona 03-02-2020, waxa ayna diyaaradu asbuuc kasta ka dagaysa 3 maalmood insha Allah, haddii ay suuq heshana sida Garowe bay duulimaad maalinle ah bilaabi doonta” ayuu yiri Agaasimuhu
Wuxuu intaas ku daray in duulimaadyada shirkadda Ethiopian Airlines ee Bosaaso ay ku xirnaan doonto hadba sida uu noqdo dalabaadka.
Boosaaso ayaa noqoneysa magaaladii 3aad ee ka tirsan Somalia oo shirkadda Ethiopian Airlines ka bilowdo duulimaad caalami ah, waxayna shirkadan horey duulimaadyo uga bilowday magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe.
Duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre oo gaashaanka udaruuray Xilka Qaadista lagula kacay.
Maamulka Somaliland oo qabsatay deegaanka Boocame
War Cusub: Dowlada UK oo Shaacisay in ay Kordhineyso Ciidankeeda Jooga Soomaliya si ay uga qeyb galaan….
Muuqaal: Daawo Barnaamijka Dareenka Shacabka Ee HCTV Oo Lagu Soo Qaatey BIlicda Magaaladda Caabudwaaq Iyo Isbedeladda Rasmiga Ah Ee Ka Jira (Fadlan Nala Daawo)
Tifaftiraha K24 7th September 2016
TOP NEWS: Maxaa laga bartay booqashada muqdisho ee xoghaya arimaha dibadda ee UK iyo kulankii uu la qaatay madaxweyne farmaajo?